JAAMACADDA CAMUUD OO DEEQ-WAXBARASHO SIISA ARDAYDA DHEGOOLEYAASHA AH |
JAAMACADDA CAMUUD OO DEEQ-WAXBARASHO SIISA ARDAYDA DHEGOOLEYAASHA AH
somalipublic / July 10, 2016
Jaamacadda Camuud ee degmada Boorama ayaa deeq waxbarasho oo lacag la’aan ah u fidisa ardayda dhegooleyaasha ah ee ka qalinjebiya dugsiyada sare. Ardaydaas oo hadda wax ka barata ilaa afar kulliyadood ayay tiradooda gaaraysaa 20 arday, oo 5 ka tirsan ay gabdho yihiin.
Jaamacadda oo waxbarashadan lacag la’aanta ah billowday sanadkii 2011 ayaa afartii arday ee ugu horreysay ee dhegool ah waxay kulliyadda waxbarashada ka qalinjebiyeen sanadkii hore. Waxay hadda macallimiin ka yihiin dugsigoodii hore ee hoose-dhexe ee Annalena. Waa dugsiga keliya ee dhegooleyaasha wax lagu baro ee ku yaalla Boorama. Isla kulliyadda waxbarashada waxaa hadda dhigta 13 ka tirsan ardaydaas deeqda ka faa’ideysanaya, sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Hormuudka Xafiiska Arrimaha Ardayda ee Jaamacadda Camuud, Prof. Saciid Axmed Habane.
Cumar Xuseen Cige oo 24 jir ah sanadkii afaraad ee ugu dambeeyay ayay u tahay kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda. “Kulliyaddan waxaan ku doortay si aan u noqdo macallin luqadda Ingiriiska bara ardayda dhegaha la’,” ayuu yiri. Af-Ingiriis ayay waxbarashada aasaasiga ah ku soo qaataan dhegooleyaasha, sidaas ayuu Cumar takhasuskiisa uga dhigtay. Wuxuu rajeynayaa inuu shaqo heli doono marka ay waxbarashada u dhammaato.
“Ujeeddada ugu weyn waa inaan rajo u abuurno ardaydaas. Badankood waxay ka soo jeedaan qoysas sabool ah. Waxaan ku dadaalaynaa in aysan waxbarashada ka go’in, maaddaama ay waxbarashadoodii aasaasiga ahayd lacag la’aan ku soo qaateen,” ayuu yiri Prof. Saciid. Dugsiga sare ee Sheekh Cali Jowhar ayaa waxbarasho lacag la’aan ah siiya dhegooleyaasha ka soo gudba iskuulka Annalena. Dugsigan oo hal fasal isugu geeya dhegoolayaasha ayay joogaan macallimiin tababarro gaar ah qaba, laakiin jaamacadda way ka duwan tahay.
Sayid Maxamed Axmed oo 21 jir ah waa arday dhegool ah oo isaguna jaamacadda ku biiray sanadkii 2014, wuxuu dhigtaa kulliyadda maamulka iyo maareynta. Weriyaha Ergo ee Boorama oo la kulmay ayuu u sheegay iyadoo looga tarjumayo in uu aaminsan yahay inay dadka kale kala siman yihiin xuquuqda waxbarashada iyo shaqo-helista. “Sababta aan wax u baranayo waa inaan shaqo helo iyo mustaqbalka aan isku filnaado,” ayuu yiri.
Inkastoo ay jaamacadda waxbarasho bilaash ah ugu deeqdo ardaydaas, haddana ma haysato agabka loogu talagalay waxbarashadooda. Dr. Saciid ayaa sheegay inay jaamacadda ku adag tahay in ay xitaa tarjumaan u sameyso ardayda, maxaa yeelay hal fasal kuma urursana oo kulliyado kala duwan ayay ku biireen. Taas ayaa keentay in fahamka ardaydaas iyo natiijada ay imtixaannada ka keenaan uu hooseeyo. Sidaas daraaddeed marka ay jaamacadda dhammeeyaan beddelkii ay degree qaadan lahaayeen waxay jaamacaddu siisaa diploma.
“Walwalka ugu weyn ee i haysta waa anigoo waqti iyo dedaal la mid ah ardayda dhagaha qaba ku soo bixiyay jaamacadda in afar sano kaddib la i siin doono shahaado Diploma ah oo u dhiganta waxbarasho 2 sano ah,” ayuu yiri Cumar Xuseen.
Sida muuqata shaqada macallinnimada ayaa ah fursadda ugu weyn ee ay ilaa iyo hadda heleen dhegoolayaashii qalin-jebiyay. Laakiin ma cadda sida ay noqon doonaan fursadaha shaqo ee dhegoolayaasha ka bixi doona kulliyadaha ganacsiga, culuumta beeraha iyo kumbiyuutarka.
July 10, 2016 in Wararka Maanta.
INDHO-FIIQIS LACAG LA’AAN AH OO KA SOCOTA ISBITAALKA BUUHOODLE
← DAD BADAN OO SHUBAN-BIYOOD LOO SEEXIYAY ISBITAALKA BELEDWEYNE
Banaanbax looga soo horjeedo weerarkii Masaajidka Nabiga oo Muqdisho ka dhacay (Daawo Sawirada) →